Umehluko ekulungiseleleni abafana namantombazane esikoleni
Ukuphendulela izinzuzo zesikole zokulungiselela isikole, ungakhohlwa ukuthi kubonakala kanjani izinga lezingane zasenkulisa, elingabonakali izici zobuntu, ngaphandle kwezici ezizwakalayo, futhi akanayo ubulili. Ochwepheshe abakha leli bhukwana, ngokusemthethweni, abazali noma othisha abangagcizeleli ubulili, ngaleyo ndlela bangenzi umehluko phakathi komfana nentombazane. Umgomo oyinhloko wokulungela esikoleni ukukhishwa ngokubambisana kwayo yonke imisebenzi abayinikezayo.
Naphezu kwalokhu, othisha abanolwazi nabazali bakholelwa ukuthi amakhosi okuthuthukiswa kohlelo oluthile oluhlelwe esikoleni kunzima kakhulu kunamantombazane. Lokhu kungaqinisekiswa ngokubheka imiphumela ehlukene efana nokuphumelela kwezemfundo esikoleni samabanga aphansi. Ochwepheshe, izikole zengqondo zesikoleni seminyaka yobudala, baqinisekisa leli qiniso, baphetha ngokuthi uhlelo lokulungiselela abafana namantombazane esikoleni kufanele babe nokungafani.
Naphezu kokuthi zonke izingane zikhula futhi zithuthuke ezweni elilodwa-emhlabeni, abafana namantombazane bafunda futhi bayakwazi ngendlela ehlukahlukene. Sekuyisikhathi eside kusungulwa emhlabeni jikelele ukuthi izikhundla zomhlaba ezivela kumbono wesifazane nabasilisa zakhiwe kusuka ezinhlangothini ezahlukene, ngokulandelana, futhi isu lokuziphatha lihlukile kakhulu. Indoda ngaso sonke isikhathi yayihlanganyele ukuzingela, ukudla, ukulwa nokuqonda ubuchwepheshe bamuva. Owesifazane, naye, udala uzwela, unakekela umndeni futhi akhule inzalo. Abazali abakhulela indodana, bavuselela kusukela ebuntwaneni, ukuthi bendoda engafanele ikhale, kodwa kufanele ibe namandla futhi avikele amantombazane. Futhi amantombazane, akhona, akhule njengamakhosazana amancane, adlala amadonki amancane ngenkathi encane, ethuthukisa amakhono okunakekela.
Ngakho-ke, kuphetha ngokuthi isikole kufanele silungise isoka ngendlela ehlukile, ehlukile ekuqeqesheni amantombazane. Kumele kuqashelwe ukuthi iningi labachwepheshe abalungiselela izibonelelo zokulungela esikoleni ngabamele besifazane. Ngakho-ke, imibono kulezi ziqondiso ezingeni elingenakuqondisisa liqondiswa kumantombazane, futhi anikwe abafana abanenkinga yokuqonda.
Isikhundla somuntu wesilisa siyisihluthulelo sempumelelo
Ukuze ingane ifike esikhungweni sezikole, ukuqeqesha okuhle kakhulu, futhi ukutadisha, akuzange kudambise isifiso sokufunda, kubalulekile ukusebenzisa leli qhinga kusuka ekuboneni kwesilisa. Ukulungiselela isikole, kubalulekile ukulalela ukwakheka nokubunjwa kwedatha yengqondo. Kuyoba kufanelekile ukuwunika umbuthano ohlose indlela yokuhlaziya, isibonelo, chess noma umbuthano owenziwe ekwakhiweni. Ngesikhathi esifanayo, lapho ufunda nezingane ngemisebenzi ethile engqondweni, akufanele aphendule, ake ingane icabange futhi iphakamise, mhlawumbe hhayi kahle, impendulo. Uma kwenzeka indodana yakho ivumela amaphutha athile esabelweni, zama ukusikisela ukuthi uzilungiselele ngokwakhe. Kodwa lapho kwenzeka ukuthi umsebenzi wengane ubangele ubunzima obunzima, kubalulekile ukusiza futhi uchaze ukuthi wenzephi amaphutha.
Abafana bayabona kahle kangcono, hhayi ngezindlebe, njengoba benombono othuthukisiwe wokubukwa. Izinsiza ezibonakalayo kumathoni aqhakazile kuzosiza ukubhekana nalolu msebenzi. Kubalulekile lapho uhlela imisebenzi oyisebenzisayo imisho emifushane eyenza izenzo. Akudingekile ngesikhathi esisodwa ukudinga ukwenziwa ngokucophelela, kubaluleke kakhulu ukuthi ingane iqonde umsebenzi futhi iqonde okuyisisekelo kokusetshenziswa kwayo. Amakhono okudweba abafana kulula ukuhlanganisa, uma ehlinzekwa ekuqaleni ngezinga levolumu. Ungasebenzisa amapende, amaki, kanye namaphepha amakhulu ephepha njengezinto zokwenziwa ngesandla. Lapho nje umfana efunda izikali ezinkulu, umuntu angancipha kancane kancane.
Ukulungiselela ingane esikoleni, kufanele kucatshangelwe ukuthi ukugaya ukudla kuzokhiqiza kakhulu uma inqubo iqhutshwa kumlingisi wegeyimu. Kungenzeka, njengesibonelo, ukuphakamisa ingane ukudweba imephu yezwe elide elide kakhulu. Lapho ufunda ukufunda, zama ukwethula ingane nge-primer elula njengemfihlakalo evela kumngane ode kakhulu kakhulu.
Enkambweni yokufunda, unganikela ingane yakho ukuthi ibone izinhlamvu ezahlukene, njengothisha noma umfundi okhuthele, kanye noxhashazi. Ukuze wenze lokhu, ungafika nomntwana onesikripthi, izinhlamvu ongazifanela ngosizo lwe-plasticine. Uma ulungiselela ingane esikoleni, kubaluleke kakhulu ukugcizelela impumelelo yakhe, ingane kufanele ibone. Ukuze kube lula, ibhodi lenkazimulo ingakhiwa, lapho kuyophumelela khona ukunqoba nokuphumelela.
Kubalulekile ukunaka iqiniso lokuthi akunakwenzeka ukuba ingane ihlale yenza umsebenzi ongaphumelelanga. Bonke abafana bajwayele ukukhathala ngokushesha. Ngakho-ke, ungashintsha uhlobo lomsebenzi, futhi ubuyele emsebenzini onzima ngemva kwesikhathi esithile.
Ake sicabangele ezinye izici ezingokomzwelo nezingokwengqondo, izici ezihlukile kwamantombazane nabafana:
Uma kuqhathaniswa nabafana - ukubunjwa kwangaphambili kolimi olulotshiwe nolulunyiwe. Izinga lokuthuthukiswa kwenkulumo lihlobene ngokuqondile nokufezekisa impumelelo yesikole.
Ukubambisana kwezinto ezibonakalayo kuthuthukiswe kakhulu, ngosizo lwamakhono omdwebo ocacile okulula ukuwaqonda.
Kubaluleke kakhulu ukuqala ukuxhumana nabantu abadala nabaphila ngesikhathi.
Njengoba ukuvuma okuzungezile kubhekisela ekunyameni esikoleni samantombazane, isifiso somntwana sokufunda siyakhula.
Bangabelana ngomdlalo futhi bafunde.
Inkulumo ikhula kancane kancane. Ukusebenza kwesikole kuhlotshaniswa nokuthuthukiswa okujwayelekile kwezingcweti futhi akuxhomeki ezingeni lentuthuko yenkulumo.
Bazimisele ukucinga izixazululo ezingezona ezejwayelekile zemisebenzi, hhayi ukukopisha izinto ezitholakalayo kakade.
Amakhono amakhono amakhono athuthuka ngokubambezeleka, uma kuqhathaniswa namantombazane. Ukulungiswa kokuhamba komlingiswa omkhulu kuphelele kakhulu, kanye nokucabanga kwendawo.
Kubaluleke kakhulu kubafana ukuma phakathi kontanga yabo. Kudingeka uqaphele isimo sabadala besimo sabo.
Ukufundisa nokudlala kungokwemvelo.
Imfundo yesikole eNgilandi
Umsebenzi wesazi sengqondo esikoleni esiphansi
Kubiza malini imali yokufundela yangasese?
Ukulawula kwabazali ngenqubo yokufundisa yengane
Abafundi besiNgisi kuya kuJunior High School
Ukudla okunomsoco kanye ne-pancreatitis. Izinyathelo zokuqala ezempilo
I-classic iklabishi yokudla
Ukushesha kangakanani ukulahlekelwa isisindo futhi kubonakale kuhle?
Izipho zomshado zezivakashi ezivela kwabashadayo
Indlela yokususa ngokushesha ama-freckles
Ukuzimela phakathi kwendoda nowesifazane
I-TOP-3 isidumbu asibiza kakhulu kunama-ruble angu-450, okuzokwenza i-eyelashes yakho iphelele!
Ikhekhe le-Strawberry nekhilimu
Umdala okhulile: Iseluleko sabesifazane
Croquettes ama-potato-cottage shizi
Ingaphakathi ekamelweni lentombazane
Indlela yokuphuma kwendlala